Xulka Belgium oo markale kaalinta koowaad ka soo muuqday & Talyaaniga oo 10-ka sare ku soo biiray qiimeynta billaha xulalka adduunka ee FIFA … (Kaalintee ayuu ku jiraa xulkeenna Soomaaliya?) – Gool FM
Xulka Belgium oo markale kaalinta koowaad ka soo muuqday & Talyaaniga oo 10-ka sare ku soo biiray qiimeynta billaha xulalka adduunka ee FIFA … (Kaalintee ayuu ku jiraa xulkeenna Soomaaliya?)
Haaruun December 10, 2020
(World) 10 Dis 2020. Xiriirka kubadda cagta Adduunka ee FIFA ayaa shaaciyey qiimeynta billaha ah ee kala sarreynta xulalka Adduunka, waxaana markale kaalinta koowaad ka soo muuqday xulka qaranka Belgium.
Xulka Qaranka Belgium ayaa sanadkii saddexaad oo xiriir ah fikta sare kaga jira qiimeynta billaha ee FIFA oo la loodin la’ yahay.
Xulka qaranka England ayaa soo galay kaalinta afaraad, Cristiano Ronaldo xulka uu kabtanka u yahay ee Portugal ayaa booska shanaad ka soo muuqday, kaasoo sare u kac sameeyey.
Xulka Spain ayaa ku jira kaalinta lixaad, halka xulka qaranka Argentina ee uu hoggaamiyo Lionel Messi uu ka soo muuqday kaalinta todobaad.
Uruguay ayaa soo cago dhigtay kaalinta siddeedaad, halka xulka qaranka Mexico uu soo galay booska sagaalaad, qaranka Talyaaniga oo sare u kac sameeyey ayaa dhammaystiray 10-ka sare ee kala sarreynta qiimeynta billaha ee xulalka adduunka ee FIFA.
Xulka qaranka Croatia ayaa hoos ugu dhacay kaalinta 10-aad, xilli kal hore uu ka mid ahaa tobanka sare.
Dhanka kale xulkeenna Soomaaliya ayaa sare u kac weyn sameeyey oo soo galay kaalinta 197-aad kaddib markii uu muddo badan ku jiray kaalimaha hoose 203-aad iyo 204-aad.
Xulka Jabuuti ayaa sare weyn u kac sameeyey waxaana uu ka soo muuqday kaalinta 184-aad, xulka Kenya uu joogo kaalinta 104-aad isla markaana uu ka sarreeyo India, dalka Ethiopia ayaana ku jira kaalinta 146-aad.
🇭🇺 Hungary 2020’s biggest climbers 🧗
Kooxda Manchester United oo go'aan ka gaartay mustaqbalka Paul Pogba... (Miyuu xiddiga reer France baxayaa bisha Janaayo?)
Tababare Zinedine Zidane oo qarka u saaran inuu isaga tago Kooxda Real Madrid dhammaadka xilli ciyaareedkan... (Maxay tahay sababtu?)